UNowa Lyles: Izinto ezihlanu ukwazi malunga neChampion yeHlabathi yeChampion
Khangela "uNowa Lyles" kwi-Spotify ukufumana umculo omnandi-uthetha-umculo waseMelika kwaye uya kuza ungenanto. Uhamba nguNojo18 xa kufikwa kumsebenzi wakhe wokurekhoda (kunye ne-Instagram hand), enye yeempawu ezininzi zeentshatsheli ezi-200m zehlabathi ezilawulayo. Ngelixa uLyl ...
I-Global U-Bolts yeNtengiso yeNtengiso, Amathuba, abaqhubi, Imiceli mngeni kunye nohlalutyo lweePorter zaMahlanu
I-U-bolt yibholithi ebumba unobumba u-U kunye nentambo yesikali kwiziphelo zombini. Ii-bolts zisetyenziselwe ubukhulu becala ukuxhasa ipipiwork, imibhobho apho kudlula khona ulwelo kunye neglus. Imarike yeU-Bolts yehlabathi ixabisa xx yezigidi zeedola zaseMelika ngo-2020 kulindeleke ukuba ifike kwi-xx yezigidi zeedola zase-US ngasekupheleni kuka-2026, ...
Ulwakhiwo lweeNdawo zokuSasazwa kweMarike yeeNdawo ezintsha, iiMfuno kunye naMathuba oShishino olukhulu ngo-2020 ukuya ku-2026: Ubunjineli bobuNjineli, ubuNjineli beKetan, uCal-Fasteners, Inc
ngu admin nge-20-06-28
Ingxelo yeNtengiso ye Washers yeNtengiso ibonelela ngomthombo oxabisekileyo wedatha yokuqonda yabanini bamashishini kunye nohlalutyo lokhuphiswano lweNtengiso ye Washers Market. Inika icandelo loShishino lweOxygenated Solvents ukujonga ukukhula nokukhula kwendleko, ingeniso kunye nezinye izinto ezininzi. Pha...
Iindaba eziThsumisayo: Umgangatho ophezulu weVenkile yokuHamba ngeVenkile, ubungakanani beNtengiso yamva nje, ukuKhula kunye nokwabelana nge-2020 ukuya ku-2025: I-ABB, i-Nokia, i-Eaton Corporation
IChicago, eUnited States: - Ingxelo iphuma njengesixhobo esikrelekrele nesivavanyo sovavanyo kunye nesixhobo esikhulu esiya kukunceda ukhusele isikhundla samandla kwiNtengiso yeArrester Arrester yeHlabathi ephezulu. Kubandakanya iiMikhosi ezintlanu zikaPorter kunye nohlalutyo lwePESI ukuxhobisela ibhasi yakho ...
Imakethi ye-U-Bolts 2020 Kanye nohlalutyo lwempembelelo ze-COVID-19 kunye neThuba leShishini 2026
Imarike yeU-Bolts isandula ukupapashwa kuPhando lweMakethi yeHlabathi jikelele enedesika engaphezulu kwe-100 yolwazi kunye nemizobo isasazwa ngamaphepha kwaye kulula ukuyiqonda i-TOC eneenkcukacha kwiNtengiso ye "U-Bolts". Ingxelo inikezela ngolwazi kunye nolwazi oluqhubela phambili lweshishini kwicandelo ...
Abasebenzi bamandla balungisa ii-insulators ezaphukileyo zeglasi eSherrill
I-SHERRill-isebe leSherrill-Kenwood kunye neCandelo lokukhanya bagqibe umsebenzi wokutshintsha i-insulators eyaphukileyo ebekwe kulwakhiwo lwasemantla komhlaba oliyi-115KV yomhlaba otshitshisiweyo. Iingxaki kunye nabaphengululi zifunyenwe obu busika ngexesha lokufakwa kwesebe ...
AbaThengi abatsha emva kweCoronavirus
Emva kokuba siqalise imveliso kwakhona ngenxa yeCoronavirus, sifumene abathengi abatsha abali-10 abavela eAfrika naseMzantsi Merika. Ukuqinisekisa ixesha elikhokelayo, simisele oomatshini abatsha aba-4 kwaye saqesha abasebenzi abatsha abangama-20.
Intengiso yeHlabathi yokuShenxiswa kweZinga eliphakamileyo iVenkile yeHlabathi engu-2020 ukuya ku-2027 (Uhlaziyo lwe-COVID-19) Ufundisiso oluPheleleyo ngabaDlali abaziintloko | Amashishini oMdibaniso, i-ABB, iiNkqubo zoMbane zeHubbell, uMbane we-GW, Unxibelelwano lwe-TE
ngu admin nge-20-06-11
Ingxelo yeNtengiso yeHlabathi yokuSasazwa kweMoto yokuGqibela yeHlabathi inezinto ezinolwazi kunye nophando olunzulu. Ingxelo yazisa ngezinto ezibalulekileyo eziqhubela phambili ukukhula kweNtengiso yeFuse Cutting yeHlabathi ephezulu, amathuba angakhange axhaswe abenzi, imeko yangoku, kunye nabaphuhlisi ...
Izinto ezintle zonyango olothusayo lwethu lwe-2020 Can-Am Maverick X3 RC -Utyelelo lwe-UTV lwezinto zeTock zethu ze-2020 Can-Am Maverick X3 RC
ngu admin nge-20-06-09
Xa uCan-Am ekhupha i-X3 X RC (Rock Crawling) uhlelo lweTurbo, yakhawuleza yaba yinto yabathengi abadla ngokukhwela ilitye njengenye yeendlela eziphambili abakhwela kuzo. I-X3 X RC yongeza i-30-in. Amathayi enkululeko yenkululeko iMaxxis, i-HMWPE ephuculweyo phantsi kwezikrweqe, i-winch ye-4 500-lb (2,041 kg) ngentambo yento y ...
Isoyikiso seCoronavirus kwiMarike ye-Insulin ye-Insulin yehlabathi: Abaqhubi, iiVenkile, amathuba, kunye nezisongelo (2019-2025)
Ingxelo yentengiso yeglasi ye-Glass ibonelela ngamehlo entaka eqhubekayo ngoku ngaphakathi kwintengiso yeGlass Insulator. Ngaphaya koko, ingxelo ikwathathela ingqalelo ifuthe lentshabalalo yenoveli engu-COVID-19 kwimarike ye-Glass Insulator kwaye inikezela ngovavanyo olucacileyo lomgaqo olindelekileyo ...
Imakethi yeGlasi ye-Insulin yeGlobal ye-2020- Impembelelo ye-COVID-19, Uhlalutyo lokukhula okuzayo kunye noMngeni | Ii-Insulators ze-Lapp, iiSeven, NGK-Locke, TE, GE
Ingxelo yophando lweNtengiso ye-Glass ye-Global Glass inika ulwazi oluqinisekileyo ngokubhekisele kwiNtengiso ye-Glass Insulator kwimeko yangoku. Ukongeza, ingxelo iqulethe amathemba exesha elizayo e-Glass Insulator ngokuhlalutya izinto ezahlukeneyo zentengiso kubandakanya iindlela zangoku, amathuba, ...
Uphando lweNtengiso ye-Insulin yoMbane weHlabathi (2015- 2026): Uvavanyo olunzulu lokuKhula kunye nezinye izinto
Isikhuseli sisixhobo sombane esisetyenziselwa ukubonelela ngofakelo phakathi kwabaqhubi bobabini. Ingasetyenziselwa ukubonelela ngenkxaso yoomatshini kwindawo yayo yokufaka isicelo. Kunye noku, i-insulator ikwaxhathisa uxinzelelo lombane, kunye noxinzelelo lwendalo esingathi sivele ngenxa yemozulu ...